Namtichi ganna 27f kophaasaa bosona keessa jiraatee, attamiin dandamate? - BBC News Afaan Oromoo
Namootni hedduun qofaa ta'uu hin jallatani. Qofummaan itti dhaga'ama. Namoota kaaniif garuu qofumman madda gammachuu ta'uu danda'a. Gaazexessaan BBC Shabnam Girewal nama dagala Iskootlaand keessa jiraachu filate.
Bara 1986tti dargaggeessi ganna 20 Kiristoofer Naayit gara bosona baadiyyaa Meeyin Ameerikaa konkolaachisee seene.
Wantoota isa barbachisan adda addaa fudhatee konkolaataa isaa gatee bosona sana keessa lukaan adeemee gale. Waggaa 27f deebi'ee hin baane.
Beekaa erga badee booda, lafa bosona yabbuun haroo North pond jedhamu marsee jiru gidduutti lafa diriiraa argate manasaa godhate.
Muka lama gidduutti huccuu cisichaaf ta'u hiidhee, dunkaana dhaabbatee, jireenya isaa eegale. Manneen bosona keessa jiran dhibbaan lakkaa'aman irraa fageenya adeemsa xiqqoorra jiraatus gutummaa guutuutti dhokatee hafe.
Naayiit manneen bosonatti dhiyaatan adda addaa keessaa wantoota adda addaa hatee jiraachaa ture. Wantoota isa barbaachisan kan akka nyaataa, gaasii bisheessa, uffata, kophee baatiriifi kitaabota hedduu qofa fudhata ture.
Hanga danda'etti miidhaa geessisuu dhiisuuf yaalaa yoo ture, waggoota darban keessan si'a 1000 ol waan haatamaniif, abbootiin manneen naannichaa sodaachuu eegalan. Dhumarratti hordoffii booda poolisiin to'annoo jala isa olche.
Barreessaan Maayik Finkil mana hidhaatti Naayitiin daawwachuun gaaffii beekamaa isa gafate "Maaliif? Maaliif dugda isaa addunyaatti gatee qofaa isaa jiraachuuuf filate?''
Kiriiis Naayit nama waliin turuun akka itti hin tolle deebise. Jalqabarratti 'yakka hojjetee baqachuuf achi gale' yaadi jedhu ture.
Kanaafis gaaffiin itti aanu "Yakka hojjette qabdaa? Wanti qaanoftee baqachaa jirtu jiraa?" kan jedhu ture.
Naayit yakka homaa akka hin hojenne himuun wantichi akkas miti jedhe. Humni wa'ii gara qofummaatti akka isa dhiibuun qaamni isaa guutummaan qofaa gammadaa akka ta'u akka itti himu dubbata.
Humni kun cimaa ta'uusaarra kan ka'e gara waggaa soddomaa keessatti takkaa qofa nama bosona keessa adeemaa ture tokkoon 'Haay' (Hi) jechuu malee nama waliin utuu hin haasa'in dabarse.
Qorri hamaan magaala Meeyin hanga -20C tti bu'us, Naayiit namni akka isa hin aggarre sodaa takkaa ibidda akka hin qabsiisne dubbata.
Naayiit galgala saatii 1tti rafee halkan keessaa yeroo qorra cimaa saatiii 9tti deebi'ee akka ka'u Finkilitti hima. Sana booda akka itti ho'uuf hanga bari'utti asiifi achi adeema.
Yeroo isaa akkamiin akka dabarsu Fiinkil gaafateeni ture.
Yeroo xiqqoof kitaabota dubbisaa, ni bareessa...garuu sun yeroo isaa guddaa akka hin fudhanne dubbata. "Waanti inni godhu is anaafi si 'homaa' jennu dha"
Yaadni saatii walakkaaf, utuu homaa hin hojjetiin, qofaa taa'uu, bilbila malee iddoo tokkotti qofaa ooluun xiqqoo isiin naasise, lafa diriiraa bosona jidduu jiru keessaa guyyootiif, ji'ootaaf, waggootaaf qofaa ta'uummoo mee yaadaa...
"Yeroon Kiriis Naayit yaada callisanii taa'uu akka naaf ibsu gaafadhe, wanta nama dhibu jedhe qaba," jedha Fiinkil.
"Tokkofaan waggaa 27 keessatti takkaa mukaa'ee hin beeku. Qofummaan itti dhaga'amee hin beeku. Fallaa sanaatu natti dhaga'ame jedha. Guutummaa guututti wanta addunyaarra jiru maraa wajiin walqunnamtii guddaa akka qabutti itti dhaga'ame.
Qaamni isaa eessatti dhuumee bosonni eessatti akka eegalu adda baasuun itti cima ture. Haariroo bareedaa uumaamaafi addunyaa wajjiin akka qabu itti dhaga'ama ture."
Goodayyaa suuraa Meeshalee kaampii Naayit keessatti argaman
Kun qorichaa hadoochaa malee qofaa ta'uun muxxannoo addaa qabaachuudha.
Kiristoofer Naayit hanna isaaf ji'a torba hidhaa ture. Waa'ee jireenya isaas Maayik Finkil alatti gaazexessaa biraa hasoofsiisuf hin eeyyamu.
Kiristofer Naayit qoofummaafi callisii jireenya isaaf badhaasa ta'e. Waan hunda boodatti dhiise bosona keessa iddoo xiqqoo jiraatee, mukeen gidduutti du'uu barbaade.
"Bara Feesbuuki fi midiyaa hawaassummaatti, inni nama waa'eensa waanti tokko akka baramu hin barbaadnedha," jedha Maayik Fiinkil.
"Kaameeraa hin qabu. Seenaa jireenyasaa hin barreesine. Homaa. Gutummatti utuu hin beekamiin jiraachuu barbaade, xiqqoofis milkaa'ee ture"
Seenaa, diingadee: Fincaan dabalatee wantoota hin baramne jaha dur qaraxni itti kaffalamaa ture
Viidiyoo Seenaa Leenca Gurraachaa fi dirree Bonayyaa
Seenaa barataa gurraacha Yuun. Oksifoord isa jalqabaa